ငွေသုံးသိန်း ရှိတယ် …ဘာ ရင်းနှီး ရင် ကောင်းမလဲ? (အရမ်း ကောင်း တဲ့ IDEA လေးပါ) – GaMone Media
Homepage / Knowledge / ငွေသုံးသိန်း ရှိတယ် …ဘာ ရင်းနှီး ရင် ကောင်းမလဲ? (အရမ်း ကောင်း တဲ့ IDEA လေးပါ)
ငွေသုံးသိန်း ရှိတယ် …ဘာ ရင်းနှီး ရင် ကောင်းမလဲ? (အရမ်း ကောင်း တဲ့ IDEA လေးပါ)
သိပ်ကောင်းတဲ့ idea တစ်ခုကို မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။ အရင်းဆုံ ကိစ္စ မတင်ပြခင် ပြောပြသင့်တဲ့ အဖြစ် အပျက် တစ်ခု ရှိပါတယ် …။
စတိမ့်ဖော့်(Stanford) တက္ကသိုလ် ကကျောင်း ဆရာမ ဖြစ်သူ တီနာ ဇီးလစ်(Tina seelig) ဟာကျောင်းသား/သူတွေကို စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပြုလုပ် လိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းသား/သူတွေကိုအသင်း (၁၄) သင်းဖွဲ့လိုက်တယ်။ အသင်း (၁)သင်း စီ ကို စာအိတ် (၁) အိတ်စီ ပေးပါတယ် …။
စာအိတ်ထဲကငွေ(၅)ဒေါ်လာဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်သည့် လုပ်ငန်း ကို သွားရင်းနှီးပြီး ငွေထပ် တိုးလာအောင် လုပ်ဆောင်ရမည်။ စာအိတ်ကို ဖောက်လိုက်သည်နှင့် ရင်းနှီးရမည့် အချိန် (၂)နာရီသာ လုပ်ရမည် …။
(၁၄)သင်းစလုံး ရင်းနှီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါက ၂ နာရီအတွင်း ရင်းနှီးခဲ့သည့် ပုံစံ၊ လုပ်ဆောင် ချက်၊ ပြန်ရလာသည့်ငွေ၊ စသည့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကို အခန်းရှေ့သို့ထွက်ပြီး ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရဲ့ ရှေ့၌ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပြောပြ ရမည်ဖြစ်သည် …။
ခဏကြာတော့ သင်းသားတွေဟာ အိုင်တီယာ တခုထွက်ပီး စမ်းသပ်ချင် သည့် စိတ် ဖြင့် ဝန်ဆောင်ခ ငွေ(၁)ဒေါ်လာ မကောက်တော့ပဲ ယဉ်ပိုင်ရှင် ကသာ၊ ဝန်ဆောင်ခကို စေတနာရှိ သလောက်၊ပေးချင်သလောက်ပေး ဆိုသည့် ဆိုင်းပုဒ်ပြန်ပြောင်း လိုက်သည် …။
ရလဒ်ကတော့ ဝန်ဆောင်ခ ပိုအရ များလာခြင်းဖြစ် သည်။ တချို့ ယဉ် ပိုင်ရှင်တွေဟာ(၃)ဒေါ်လာမှ (၅)ဒေါ်လာထိ ထုတ်ပေးကြသည်။ ဒီလို စွမ်းဆောင်မှု ကတော့ ပြသနာတွေကို အကဲ ခတ်ပြီး ပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိ ခြင်းပဲ ဖြစ်သည် …။
ကျန်ရှိသည့်အသင်းများဟာလဲဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း။ ကျောင်းတွင်းသို့ချိုချဉ်၊ မုန့်၊ အရောင်း အဝယ်လုပ်ခြင်း။ Popular ဖြစ်တဲ့ သီချင်းခွေထုတ်လုပ်ရောင်းခြင်း။ ကျန်သည့် ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရဲ ဝင်ငွေ၊ အမြတ်ငွေတွေ ကတော့ မဆိုးကြ ပါ …။
ဒါပေမဲ့ ငွေလုံးဝ ရှာလို့ မရတဲ့ အသင်းလဲ ရှိပါတယ်။ သူတို့အသင်းကတော့ စာအိတ်ထဲက ငွေ(၅)ဒေါ်လာကို ထီ သွားဝယ် လိုက်သည်။ ထီမပေါက် ပါ။ ကံနဲ ကစားလို့ အရင်းနှီးပါ ပြုတ်သွားရော။
ဒေါျလာ (၆၀၀) ရှာနိုငျသညျ့ အသငျး၊ ဟုတျကဲ့….သူတို့ အသငျးကတော့ အိုငျဒီယာ အတျာလေးကောငျးပါတယျ …။
လုပ်ဆောင်ချက်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ သူတို့ သွားသည်။ ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲနှင့် တွေ့စုံသည်။ သူတို့ကျောင်းမှာ ပြုလုပ်နေသည့် စိန်ခေါ်မှုအကြောင်းအားလုံးကို ရှင်းလင်းပြောပြသည် …။
ဒီအဖြစ် အပျက်ကို ဒီလောက်နှင့်ပဲ အဆုံးသတ် လိုက် ပါတော့မည်။ အရင်းအနှီး တစ်ပြားမှ မသုံးပဲ။ ငွေ (၆၀၀) ဒေါ်လာ ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား/သူ တွေဟာ။ ဘာတွေ သင်ပေးသွားပါသလဲ။ ???
ဟုတ်ကဲ့။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ငွေအင်အားကို မကြည့်သင့်ပါ။ အာရုံမစိုက်သင့်ပါ။ ကိုယ့်မှာ ရှိသည့် ညဏ်ရည်ကိုသာအသုံးချ လိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ အကယ်၍ငွေ ၁၅ သိန်းရှိမှ။သိန်း ၃၀ ရှိမှ။ သိန်း ၁၀၀ ရှိမှ။ရင်းနှီးနိုင်မယ်။ လုပ်နိုင်မယ် လို့သာတွေးနေရင်အာရုံစိုက်နေရင် မင်းဦးနှောက်ကို မင်းပဲပြန်ပိတ်ပင်လိမ့်မယ် …။
နေ့ခင်းပိုင်းမှ ညနေအထိ လေယဉ်လက်မှတ်ရောင်း ကိုယ်စားလှယ် လုပ်သည်။ ဆိုင်ခန်း ငယ် ကလေးဖြင့်လေယဉ် လက်မှတ်ရောင်းနေသည် …။
သူလုပ်ချင်တာကို တတ်နိုင်သလောက် သူလုပ် လာ သည်။ အခုလဲ သူပုံနှိပ်စက်တွေ ပါ လုပ်နေသည်။ပုံနှိပ်သည့် နေရာက အိမ်မှာ၊ ပစ္စည်း/အလုပ် လက်ခံ တာက ဆိုင်မှာ ဖြစ်သည် ..။
တတ်နိုင်သလောက် စလုပ်ပါ။လုပ်ပြီး မအောင်မြင်သေးပေမဲ့ အားမငယ် ပါနဲ့။ ပြသာနာတွေကို သိရှိ လာမယ်။ ဖြေရှင်း တတ်လာ မယ်။ အစပိုင်း ဝင်ငွေနည်းနေပေမဲ့ ဝင်ငွေ များလာအောင် လုပ်နိုင် မည့် နည်းလမ်းတွေကို အဖြေရှာ တတ်လာ မယ်။ ရည်မှန်းချက်ကို အလှမ်းမဝေး ပါစေနဲ့ …။
စာဖတ်သူလဲ အရင်းအနှီး ကိစ္စကို ဘယ်လိုမြင် ပါသလဲ၊ ဘယ်လို ယူစ ပါသလဲ၊ ဆိုတာကိုComment ပေးကြပါလို့။ ဗဟုသုတတွေ မျှဝေရင်း အပိုင်း(၂)မှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွ ားကြ မယ်။အားလုံးငွေကြေးရေးအဆင်ပြေကြပါစေနော် …။
ဒီစာက သင့်အတွက် အကြိုးရှိစေတယ်ဆိုရင် Like & Share လုပ်ပေးကြပါလို့ …။ ။
Previous post အခု ချိန် မှာ ဘာလုပ်လုပ် အပြစ်ပြောဖို့ ချောင်းနေ တဲ့ လူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာတဲ့ ကောင်းမြတ်စံ
Next post ကိုရီးယား တော်လှန်ရေးနေ့ မှာ မကြယ် စင် အကျႌ ဝတ်ဆင် ခဲ့ တဲ့ တောင် ကိုရီးယား အမတ်